दैनिक ७ सय भन्दा बढीलाई निःशुल्क खाना - २७ भाद्र २०७७, NepalTimes
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका, रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरु वा कोरोनाकै कारण खाना खान नपाएकाहरुलाई विभिन्न मनकारी व्यक्ति र संघ संस्थाले अहिले निः शुल्क खाना खुवाइरहेका छन् । चार महिना लामो लकडाउन, त्यसपछिको निषेधाज्ञाको यो समयमा सयौ व्यक्तिहरुका लागि खाना बनाएर त्यो पनि सधै एउटै समयमा खुवाउनु चानचुने कुरा होइन । अनि उनीहरुले बनाउने खाना कसरी बन्छ ? कहाँ बन्छ ? त्यसको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्छन होला ?त्यस्तै खाना बनेको ठाउँबाट कसरी प्याकिङ भएर आउँछ ? आज हामी यिनै जिज्ञाशा मेटाउदै छौ । हामीले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखेका दृश्यका भित्री कथा आज पस्कँदैछौ ।